I-OMG GPS Tracker yokuBukela yaBantwana yaBudala be-10 nangaphezulu / yaBadala [GPS020W] | I-Singapore ephezulu ye-Mini GPS Tracker ye-Autism / Autistic yaBantwana kunye neDementia yabantu abadala
I-GPS ye-GPS yokulandelela umkhondo wabantwana aBudala be-10 nangaphezulu / kwabadala [GPS020W]
I-3G / 4G yokujonga umkhondo wabantwana yenzelwe ukunika abazali okanye abanonopheli uxolo lwengqondo malunga nokuba uphi umntwana. Akusoloko kulula ukugcina amehlo omabini kulutsha olusebenzayo, kwaye ukulandelela i-GPS yeyona ndlela ilungileyo yokugcina umkhondo wabo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwabo.
* I-S $ 198 (iwaranti ezi-6 zeenyanga) - usu $ 248
Ukuhanjiswa kwemini enye (Myalelo namhlanje kwaye ufumane into yakho namhlanje) -S $ 15
I-Stylish 3G GPS Watch sisizukulwane esitsha se-GPS tracker gadget eneendlela ezininzi zokubeka i-GPS + WIFI + LBS, enokusetyenziselwa abantwana, abantu abadala, abadala, abakhubazekileyo njl njl isebenza ngokugqibeleleyo naphina kwihlabathi liphela. Le gadget encinci ayisiyomlindo kuphela, umkhondo weGPS, inokusebenza njengeselula enokwenza iifowuni! Ikwaxhotyiswe ngemisebenzi, enjengekhamera, inyathelo lokuphamba, ingxelo yemozulu, umnxeba, ukujonga ngelizwi kude, umkhondo wendlela yomlando, ucingo lwe-geo, ingxoxo yelizwi njalo njalo!
Iindlela zeGPS + WIFI + LBS Isixhobo singazijonga ngokuzenzekelayo inethiwekhi yokumisa kwaye sitshintshe indlela yokumisa ngokuzenzekelayo kwakhona, ngaphakathi usebenzisa i-WIFI / LBS imo yokumisa ngenkqubo ngaphandle kwemodi yokubeka i-GPS. (Inkxaso yeGoogle Map)
Umnxeba wefowni: Ngaphandle kokusebenza njenge-tracker ye-GPS, esi sixhobo sinokusebenza njengefowuni yokufowuna!
Umzila Wemizila Yeembali (IRekhodi Yemilenze): Indlela yokuhamba kwesiphathi seGPS kwezi nyanga zintathu zidlulileyo ziya kurekhodwa ukuze zijongwe kwixesha elizayo, ukuze ukwazi ukulandelela zonke iindawo umnini weGPS ebeye kuzo, kulula ukufumana ezilahlekileyo, ezinje ngabantwana bakho, abantu abadala, usapho oluthandayo okanye imithwalo, izinto zexabiso, izilwanyana zasekhaya, iimoto, izithuthuthu njl.
I-Alarm yeFowuni (i-Geo-fence): Unokuseta indawo ekhuselekileyo (umgcini weGPS njengeziko) ukugcina umgcini wewotshi ngaphakathi kwendawo, xa umnini weGPS ephuma kwindawo ekhuselekileyo, isixhobo siya kuphakamisa i-alamu kwifowuni yakho yesicelo.
Ukujonga Ilizwi ekude (Mamela ngaphakathi): Kwisicelo-useto, unokuseta inombolo yokujonga, xa ukhetha umsebenzi we "Remote Voice Monitoring", umyalelo uya kuthunyelwa kwisixhobo seGPS emva koko esi sixhobo siza kubiza inombolo yokujonga ngokuzenzekelayo, (ukuba ungumnini yenombolo yokubeka esweni) emva koko ucofe ukuphendula umnxeba, kwaye ungaziva izandi ezijikeleze isixhobo seGPS ngelixa icala lesicatshulwa lingenakukuva konke konke! Ngalo msebenzi, xa umntwana wakho ekwimeko eyingozi okanye isilwanyana sakho sikude kuwe, unokuva okwenzekayo ngeenxa zonke kubo!
Akukho ntlawulo yenyanga (Inkxaso yokuhlawulwa kwangaphambili kunye nokuhlawulwa kweposi).
Iindidi ezintathu zendlela yokusebenza. Umsebenzisi unokukhetha ukuseta kwifowuni yesoftware ye-APP ukukhetha indlela yokusebenza.
1. Ukubeka ngokukhawuleza (i-1 iminithi): Izithuba zemizuzu ezi-1 zihlaziya ulwazi lwendawo.
2. Isikhundla esifanelekileyo (imizuzu ye-10): Isithuba semizuzu eli-10 sihlaziya ulwazi lwendawo.
3. Gcina ukubeka umbane (iyure): Izithuba ezi-1 zokuhlaziya ulwazi lwendawo.
Kubonakala: Ibhendi yewotshi e-eco-friendly ecekeceke kakhulu kunye nealuminium alloy ipleyiti yokubukela iyenza ibekhaphukhaphu & isitayile kunye nesiphelo esiphakamileyo; izixhobo ezizodwa zokulungisa izinto zenza ukuba kulunge kakhulu ukuziva kwaye kumnandi emehlweni.
Imibala: Ipinki, Mnyama, Brown, Luhlaza
11960 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-5 Namhlanje
GPS020W -OMG GPS Tracker Bukela i-Alzheimer…
I-GPS033W-ye-OMG yokuGcina amanzi ngokuGcina abantwana abaselula kunye…
I-OMG yaBadala yokuBek'esweni kwezeMpilo ye-GPS (GPS034W)
I-GPS044W-i-OMG yoLondolozo lweMpilo yaBantu abaDala